Bit By Bit - Ethics - 6.7.1 The IRB ari uriri, kwete siringi
Vatsvakurudzi Vazhinji sokuti rokubata dzinopikisana maonero ari IRB. Kune rimwe divi, ivo chimbofunga IRB kuva bumbling muboka revatungamiriri. Asi, panguva iyoyowo, ivo funga IRB kuti kwokupedzisira muyananisi kuzeya zvetsika. Kureva, vanoita kutenda kuti kana IRB inotenderwa izvozvo, ipapo anofanira kuva OK. Kana tinobvuma zvokukwegura chaizvo chaicho IRBs sezvo ivo Pari kuvapo-uye kune vazhinji vavo (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) Ipapo isu sezvo vaongorori tinofanira kutakura zvimwe basa nokuti tsika pakutsvakurudza yedu. The IRB riri pasi kwete nedenga, uye pfungwa iyi zvine cho- huru mbiri.
Chokutanga, IRB ari uriri zvinoreva kuti kana uri kushanda pane imwe yunivhesiti chinoda IRB review, unofanira kutevera mitemo iwayo. Izvi zvingaita pachena, asi Ndakacherechedza kuti vamwe vanhu vanoratidza kuda kudzivisa IRB. Kutaura zvazviri, kana uri kushanda munzvimbo tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira kugadzikana, iye IRB inogona kuva shamwari dzine simba. Kana ukatevera mitemo yavo, vanofanira kumira shure unofanira chinhu kuenda chakaipa tsvakurudzo yako (King and Sands 2015) . Uye, kana musingadi kutevera mitemo yavo, unogona kuwana muri vako vari akaoma chaizvo ezvinhu.
Chechipiri, IRB haisi sirin'i zvinoreva kuti chete ichizadza kubuda siyana enyu uye nekutevera mitemo kwete zvakakwana. Mumamiriro ezvinhu mazhinji sezvo nevatsvakurudzi ndimi anoziva zvikuru sei kuita tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira. Pakupedzisira, imi muri mutsvakurudzi uye penyaya basa akavata newe; ndiwo zita renyu pamusoro papepa.
Imwe nzira nechokwadi kuti imi kubata IRB somunhu uriri uye kwete sirin'i ndiko ichisanganisira okuwedzera yetsika iri mapepa enyu. Kutaura zvazviri, unogona kunyora rako chemufungo okuwedzera pamberi kudzidza kwako kunyange anotanga kuti kuzvimanikidzira umene kufunga sei iwe ichatsanangura basa rako vezera rako uye voruzhinji. Kana ukaona kugadzikana apo kunyora okuwedzera wako, ipapo uchidzidza varege urove yakakodzera zvetsika pachiyero. Kuwedzera pakubatsira iwe rokuongorora basa rako pachako, kubudisa enyu horokodzwa yetsika kuchabatsira tsvakurudzo vemunharaunda kukurukura yetsika nyaya uye kumisa dzemunharaunda zvakakodzera kwakavakirwa mienzaniso kubva chaiyo empirical tsvakurudzo. Table 6.3 chipo empirical tsvakurudzo mapepa kuti Ndinofunga wokukurukura kutsvakurudza tsika dzakanaka. Handibvumirani navo ose vanoti kuburikidza vanyori munhaurirano idzi, asi vari mienzaniso vose vaongorori kuita kuvimbika mupfungwa kunorondedzerwa Carter (1996) : mune chimwe nechimwe, vaongorori (1) kusarudza zvavanofunga ndizvo zvakanaka uye zvakaipa; (2) vanoshandisa kwakavakirwa zvavanenge vasarudza, kunyange panguva pachedu mutengo; uye (3) vanoratidza pachena kuti vari kuita papfungwa yavo yetsika kuongorora mamiriro acho ezvinhu.
Table 6.3: Papers vane nhaurirano dzinonakidza pakati tsika dzavo tsvakurudzo.
Rijt et al. (2014) munda kuedza pasina mvumo
tichidzivisa chechinyorwa kukuvadza
Paluck and Green (2009) munda kuedza munyika kusimukira
tsvakurudzo pamusoro nzwisisa nyaya
kunzwisisa mvumo nyaya
remediation pangava pokukuvadza
Burnett and Feamster (2015) tsvakurudzo pasina mvumo
vakadengezera nengozi uye kubatsira kana njodzi vakaoma uwandu
Chaabane et al. (2014) magariro zvinorehwa tsvakurudzo
kushandisa leaked date mafaira
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) munda kuedza pasina mvumo
Soeller et al. (2016) yatyora mashoko basa